Ukusetyenziswa komatshini wokukhetha imibala kwisityalo sokugaya irayisi
Umatshini wokuhlelwa kombala uhlola irayisi ngeendlela zekhamera yedijithali kwaye ususe ukungcola ngokugqabhuka komoya omfutshane oxineneyo usebenzisa umahluko wombala. Lo matshini usetyenziswe ngempumelelo kwishishini lokugaya irayisi ixesha elide.Umatshini wokuhlela imibala usetyenziswa ekucoceni irayisi ukucoca ukususa irayisi etyheli ,irayisi emnyama kunye nokunye okucoliweyo kunye nezinye izinto ezingaphakathi ezingcolisayo. Oomatshini bokucwangcisa imibala ngokuqhubekekayo banamandla, icompact,idinga ukugcinwa okuncinci kwaye kudla amandla amancinci. Ukuhlelwa kombala sele kukhulile kwaye kufanele kuthathelwe ingqalelo ukubandakanywa kuso nasiphi na isityalo samanje sokwenza irayisi.
Kuthelekiswa nokubanjwa ngesandla, Iimpawu zemibala azigcini nje ngokugcina abasebenzi kunye nexesha lamashishini okuqhubela irayisi, ekwabonelela ngokusebenza okuphezulu kunye neendleko ezisezantsi zokuqhubekeka, kunye nokuphuculwa komgangatho yerayisi emhlophe, Izibonelelo zoqoqosho kunye nezibonelelo zentlalo ntle zeemveliso ezihleliweyo, kodwa bancede namashishini ekwakheni umfanekiso ekumgangatho ophezulu kwaye bazenzele ezabo iintlobo. Kwakhona, Kuyimfuneko kumzi mveliso wokugaya irayisi ukwazisa ngemigangatho yemibala ekumgangatho ophezulu ukunqanda ukupheliswa kukhuphiswano lwelinye ilizwe.
Umatshini wokuhlela umbala ngenzuzo elandelayo
1.Umgangatho -Ungumatshini onomgangatho wokuguqula kwiimveliso zokutya. Abavelisi banokujonga ngokulula umgangatho weemveliso kwaye basebenzise ngokulula abo bakwimarike.
2.Ulawulo -zokusetyenzisWa lunokuthatha isigqibo ngokulula kwaye lutshintshe ubukhulu bemibala kunye nokuguquguquka kokwaqaba. Oku kubanika ulawulo olongeziweyo kwiimveliso, Umzekelo ukuhlela into ngokwamanqanaba amaninzi.
3.Umthamo -Umatshini uzenzekelayo kwaye awubuyisi isantya sokujonga umgangatho. Ngokwenyani iyakhawulezisa inkqubo yokuqinisekisa umgangatho wonke ngokususa iimpembelelo zabantu ezinje ngokudinwa nokubetha.
4.Umsebenzi – Oomatshini abazenzekelayo banciphisa iindleko zabasebenzi kunye nemicimbi yolawulo. Ikwanciphisa umda wemposiso eyamkelweyo ukuya kumda omkhulu obandakanya iimpazamo zabantu.
Ukusebenza kwevidiyo yomatshini wokukhetha imibala
Nxibelelana nathi Ngokusetyenziswa komatshini wokukhetha umbala kwimitha yelayisi